Brownie cheescake, tsindrin-tsakafo matsiro izay tianao be. | Recipe ao an-dakozia
Montse Morote | 21/05/2021 09:00 | Postres, Fivarotana mofomamy
Cheescake brownie fifangaroana tsindrin-tsakafo roa izay mahavariana, matsiro, satria ny tsiron'ny sôkôla mahery sy ny tsy fitovian'ny mofomamy fromazy izay malefaka kokoa dia mahatalanjona. Fifaliana amin'ny tsindrin-tsakafo.
Azo antoka fa efa nataonao misaraka ireo fomba fahandro roa, ka ho mora aminao ny manomana azy. Mora ny manamboatra an'io brownie cheescake io ary toa tsara.
Sakafo tsindrin-tsakafo amerikana fanta-daza roa. Ny tsindrin-tsakafo mety indrindra amin'ny fankalazana iray, azo antoka fa faly ireo vahininao.
Nataoko tsingerintaona nahaterahana ity mofomamy ity ary nahomby tokoa. Manoro anao izany aho.
Fotoana manontolo: 1 h 10 min
Akora ilaina amin'ny brownie:
200 gr. tsindrin-tsakafo sôkôla
200 gr. dibera
225 gr. ny siramamy
125 gr. Ny lafarinina
Akora ilaina amin'ny fromazy:
300 gr. fromazy fanosotra
Yaourt 375 na fromazy nokapohina
180 gr. ny siramamy
50 gr. lafarinina katsaka (Maizena)
Mba hanaovana brownie cheescake dia hanomboka amin'ny brownie isika.
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180ºC izahay, manosotra ny bobongolo izay hampiasainay amin'ny dibera ary mametraka taratasy fanaova.
Manomboka amin'ny brownie izahay, atsoninay ny sôkôla miaraka amin'ny dibera ao anaty microwave, ahetsiketsika tsara.
Maka lovia iray izahay, ampidirinay ny atody sy ny siramamy, kapohinay izy, ampidirinay ny lafarinina voasivana, ampifangaroinay tsara izy mba tsy hisy vongan-kazo ary farany ampifangaroinay ilay sôkôla natsonika. Namandrika izahay.
Manomana ny cheescake izahay:
Ao anaty vilia iray dia apetratsika ao anaty lovia rehetra ny sakafon'ny fromazy. Nokapohinay tsara ny zava-drehetra mandra-pahatongan'ny crème tsara.
Apetrakay ao anaty lasitra sy ny cheesecake eo amboniny ny koba brownie. Amin'ny tendron'ny antsy dia hanaovantsika savily hifangaro ny koba.
Apetrakay ao anaty lafaoro mandritra ny 40 minitra ny mofomamy. Hodinihintsika amin'ny fanindronana ny afovoan'ny mofomamy amin'ny paompy na antsy, ny ampahany amin'ny fromazy dia tsy maintsy tavela fa ny ampahany brownie kosa tsy maintsy mando kely.
Rehefa eo izy dia avoakantsika ary avelao hangatsiaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Postres » Cheescake brownie
Mofomamy oatmeal miaraka amin'ny paoma sy voaloboka